Xiddigii Real Madrid Ay Ka Boobtay Barcelona Ee Takefusa Kubo Oo Shandaddiisa Xidh-xidhay - Halkee Ayuu Kusii Jeedaa? - Gool24.Net
Xiddigii Real Madrid Ay Ka Boobtay Barcelona Ee Takefusa Kubo Oo Shandaddiisa Xidh-xidhay – Halkee Ayuu Kusii Jeedaa?
Xiddiga da’da yar ee reer Japan ee Takefusa Kubo ayaa shandaddiisa xidh-xidhay, waxaanu u ambobaxayaa koox kale oo uu xili ciyaareedka soo socda u dheeli doono, kaddib markii uu kasoo laabtay Real Mallorca oo uu fasal ciyaareedkii hore amaah ugu maqnaa.
Takefusa Kubo oo muddo ka tirsanaa Barcelona, kana mid ahaa ciyaartoyda kulliyadda La Masia lagu tababaray ayaa lagu qasbay inuu dib ugu laabto waddankiisa kaddib markii ay UEFA burburisay heshiiskiisii Barcelona, waxaana taas ka faa’iidaysatay Real Madrid oo lasoo saxeexatay.
Da’yarkan oo lagu tilmaamo inuu leeyahay farsamooyinka Lionel Messi ayey Real Madrid amaah ku bixisay sannadkii hore, waxaanu wacdaro kasoo dhigay Real Mallorca oo heerka labaad u dhacday, laakiin wali waxa uu kasii maqnaan doonaa Real Madrid muddo sannad kale ah.
Sida uu qoray wargeyska Marca, kooxda kubadda cagta Villarreal ayaa qarka u saaran inay heshiis amaah ah ku qaadato Takefusa Kubo, waxaana ballan-qaad u sameeyey tababare Unai Emery oo dhowaan loo magacaabay kooxda.
Emery ayaa waxa uu u sheegay inuu kaalin muhiim ah ka siin doono kooxdiisa, isla markaana uu waqti ciyaareed oo wanaagsan iyo khibradda uu u baahan yahayba uu ka heli doono haddii uu kula soo biiro Yellow Submarine.
Bayern Munich ayaa sidoo kale xiisaynaysa inay la saxeexato Kubo, laakiin Real Madrid ayaa la wariyey inay door bidayso inay kusii hayso gudaha horyaalka Spain iyo kooxaha ay muuqato inuu boosak ka helayo.
Real Madrid iyo Villarreal ayuu wargeysku sheegay inay gaadheen heshiis hal xili ciyaareed oo amaah ah ay ku kala qaadanayaan Kubo, isla markaana ay bixinayso Villarreal 2 milyan oo Euro si ay u hesho xiddigan da’da yar.
Tababare Zinedine Zidane oo mustaqbalka kooxdiisa u arka Takefusa Kubo, ayaa waxa uu doonayaa inuu hal sano oo kale kasii maqnaado Santiago Bernabeu si uu usoo helo khibradda looga baahan yahay ciyaartoyda Real Madrid u ciyaaraysa.
Si kastaba, heshiiska amaahda ah ee ay Villarreal kula wareegayso Takefusa Kubo ayaanu jirin qodob ogolaanaya in kooxda uu ku biiray ay iibsan karo haddii ay ku qanacdo bandhiggiisa.